WEEKDAY - LibreOffice Help
Gatii aduu kennameef maqaa guyyaa torbaan keessaa deebisi. Yoo akaakuu hin qabnee ykn akaakuu=1 ta'een ibsame,guyyaan deebi'uu kun intiijera 1(Dilbata) fi 7(Sanbata) gidduutti argama.Yoo akaakuu'n=2 ta'ee lakkaawwiin Wixaata=1 irraa eegala;Yoo akaakuu'n=3 ta'ee,lakkaawwiin Wixaata=0 irraa eegala.
Lakkoofsa, akka gati aduutti, kurnyee dha,kan guyyaa itti argannu.
Akaakuu akaakuu shallaggii murteessa.akaakuu=1'f guyyaa torbanii dilbata irraa eegalun lakkaawwama(kunis yeroo akaakuun ulaagaalee dagatamuu akka durtitti taa'a). Akaakuu=2'f guyyaan torbanii wiixata=1 irraa jalqabuun lakkaawwuu eegala.Akaakuu=3'f guyyaan torbanii wiixata=0 irraa jalqabuun lakkaawwuu eegala.
These values apply only to the standard date format that you select under Tools - Options' - LibreOffice Calc - Calculate'.
=WEEKDAY("2000-06-14") 4 kenna(akkasumas akaakuu uulaagaaleen ni hafa kanaaf lakkaawwii waltaawwaatti gargaaramna.Lakkaawwiin waltaawwaa Dilbata lakkoofsa 1 irraa eegala.Caamsa 14,2000 Roobii ture kanaafu lakkoofsi guyyaa kanaas 4 dha).
=WEEKDAY("1996-07-24";2) 3 kenna(akaakuun ulaagaalee lama dha kanaafuu wixaatni lakkoofsa guyyaa 1 ta'a.Adooleessa 24,1996 Roobii ture kanaafuu lakkoofsi guyyaa kana 3 ta'a).
=WEEKDAY("1996-07-24";1) 4 kenna(akaakuun ulaagaalee 2 dha kanaafuu Dilbata lakkoofsa guyyaa 1 ta'a.Adooleessa 24,1996 Roobii ture kanaafuu lakkoofsi guyyaa kana 4 ta'a).
=WEEKDAY(NOW()) lakkoofsa yeroo ammaa kana kenna.
Fankishiniin guyyaan A1 kun akka guyyaa hojii ta'ee mul'isuu argachuuf,IF fi WEEKDAY jedhuu akka armaan gaditti fayyadami:
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Calc/WEEKDAY/om&oldid=1576842"
This page was last edited 10:14:12, 2016-06-20 by LibreOffice Help user WikiSysop.